XASAASI:- Ciidamada AMISOM Oo Diiday ka qeeybgalka Dagaal ka dhan ah Al shabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
XASAASI:- Ciidamada AMISOM Oo Diiday ka qeeybgalka Dagaal ka dhan ah Al shabaab
Ahmed weheliye Gaashaan 20 June 2018 20 June 2018
Kismaayo ( Mareeg News ) Maamulka Jubbaland ayaa ka hadlay dhaq dhaqaaqyada ciidan iyo howl galada ka socda Jubbooyinka, kaasoo qorshihiisa yahay in Al-Shabaab looga saaro deegaanada ay gacanta ku hayaan.
Ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Jubbaland ayaa la wareegay tuulooyin ku dhow dhow deegaanka Baar Sanguuni, gaar ahaan Tuulada lagu magacaabo Muuse Xaaji.
Taliye kuxigeenka Hoggaanka ciidanka daraawiishta Jubbaland Salmaan Axmed Bashiir ayaa sheegay in AMISOM aysan qeyb ka aheyn howl galka, illaa iyo hadda aysan garaneyn sababta.
Waxaa uu sheegay in illaa iyo hadda aysan buuxin kaalintii AMISOM ay ku lahaayeen howl galada socda, waxaana uu intaa ku daray inay rajeynayaan dagaalka ka socda inay qeyb ka noqon doonaan.
Shir degdeg ah oo maalmo ka hor ka dhacay magaalada Kismaayo oo uu shir guddoominayay Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa looga hadlayay howl galada iyo sidii loo dardar gelin lahaa duulaanka ka dhanka ah Al-Shabaab.
ciidamada AMISOM ayaa markaan la soo baxay dabeecad ka duwan tii hore waxeeyna si toos ah iyo si aan toos aheeynba uga hor imaanayaan dadaadalada dowlad goboleedyada iyo dowlada federaalka ka wadaan sidii gacanta loogu soo celin lahaa dhulka kamaqan gacantooda oo ay al shaabab maamulaan.
DEG DEG :- Qarax Lagu Xeray Gaari Oo Muqdisho Lagula Beegsay Qof masuul ah.